“ မ ကျော် သင့် သော စည်း က လေး များ ” - Real Gaming
လူ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် ကြား မှာ စည်း လေး တစ် ခု တော့ ထား ပေး ပါ သူ ငယ် ချင်း ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ချစ် သူ ချင်း ပဲ ဖြစ် ဖြစ်မောင် နှ မ ကြား မှာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် နောက် ဆုံး မိ ဘ နဲ့ သား သ မီး ကြား မှာ တောင် စည်း လေး တစ် ခု ရှိ ရ ပါ မယ်
လို တာ ထက် ပို မ ဝင် မိ စေ ဖို့…သူ့ ရဲ့ကိုယ် ပိုင် ဆုံး ဖြတ် ချက် ကိုယ် ပိုင် ခံ ယူ ချက် သူ့ ရဲ့လွတ် လပ် ခွင့် သူ့ ရဲ့ရည် မှန်း ချက် သူ့ ရဲ့ပြင်လို့ မ ရ တဲ့ ဗီ ဇ နဲ့ စ ရိုက် တွေ အ တွက် ကိုယ် က ဝင် ရောက် သင့် တဲ့ အ တိုင်း အ တာ ထက် ပို ပြီး မ ဝင် မိ စေ ဖို့….
မေး သင့် မေး ထိုက် တာ ထက် ပြော သင့် ပြော ထိုက် တာ ထက် ပို ပြီး ဘောင် တွေ မ ကျော် ဖို့ အ တွက် စည်း တစ် ခု ထား ကို ထား ရ ပါမယ် …
အ ရမ်း ချစ် ကြ တဲ့ သူ တွေ ဘာ လို့ မုန်း သွား ကြ သ လဲ ? အ ရမ်း ခင် ကြ တဲ့ မိတ် ဆွေ တွေ က ဘာ လို့ အ မုန်း ဆုံး ရန် သူ တွေ ဖြစ် သွားကြ သ လဲ ?
အ ရင် က အ ရမ်း အ ဖွဲ့ ကျ စား အ တူ သွား အ တူ ပျော် ခဲ့ ကြ တဲ့ BFF တွေ ဘာ လို့ ခပ် တန်း တန်း တွေ ဖြစ် ကုန် ကြ သ လဲ ?
ဘာ လို့ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် အ ထင် မ ကြီး မ လေး စား ကြ တော့ တာ လဲ… ?
ပြဿနာ အ များ စု ရဲ့ အ ဖြေ က တော့ လို တာ ထက် ပို ပြီး စည်း တွေ ကျော် ဘောင် တွေ နင်း ခဲ့ ကြ လို့ ပါ …
အ ရမ်း ခင် အ ရမ်း ချစ် နေ ကြ ဆဲ ကာ လ မှာ တော့ အ ယုံ ကြည် ရ ဆုံး လို့ ထင် မိ ပြီး မိ မိ ဘ ဝ အ ကြောင်း မိ မိ စိတ် ဓာတ် အ ကြောင်း မိ မိ ရဲ့ မိ သား စု အ ကြောင်း အိတ် သွန် ဖာ မှောက်ပြော ပြ ကြ သ လို မိ မိ က လည်း သူ တ ပါး ရဲ့အ တွင်း ရေး တွေ ကို အ ကြံပြု ဝေ ဖန် ဆုံး ဖြတ် ကြ ပါ တယ်….
အဆင်ပြေနေတုန်းတော့ အဆင်ပြေနေတာပေါ့ အဲဒီကတစ်ဆင့် တက် သူ့ရဲ့ဘဝ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ သူ့ရဲ့အတွင်းရေး ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးထိ ဝင်ရောက်လာကြတယ်
စည်းလွတ် ဝါးလွတ်တွေပြောလာ ကြတယ် ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်အမြင်တွေကိုသူက လက်မခံတဲ့အခါ ရန်တွေဖြစ်လာကြတယ်..
သူ့ရဲ့စည်းလွတ်ဘောင်လွတ် နယ်ချဲ့ပြီး မိမိအတွင်းရေး အထိ ပါဝင်လာတာကိုလည်း ကိုယ်တိုင်က အရင်လို မနှစ်သက်နိုင်တော့ ပါဘူး အဲဒီ အခါမှာတော့
သူ့အပေါ်ကိုယ်မြင်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်အထင်ကြီးခဲ့တဲ့ အားသာချက်တွေ အပြင် ကိုယ်လက်ခံလို့ မရတဲ့ ကိုယ်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့ character တွေပါသိလာရတဲ့အချိန်မှာ စည်းတွေတော်တော်ကျော်နေပါပြီ
အကောင်းမြင်တာတွေ မှေးမှိန်ပြီး မကောင်းမြင်ချက်တွေ အားသာလာတဲ့အချိန်မှာတော့ လူနှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်ကလို မနွေးထွေးနိုင်တော့ပါဘူး
သူကငါထင်သလို မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတွေသူက မိတ်ဆွေကောင်း မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတွေ တွေးမိလာကြပါတယ် တကယ်တော့ လူတိုင်းရဲ့အတွင်းစိတ်မှာ weak point တွေရှိနေပါတယ် မရင့်ကျက်မှုတွေရှိတယ် မပြည့်ဝတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်
အပေါ်ယံကသာ လူတွေနဲ့အဆင်ပြေဖို့ လူအထင်ကြီးဖို့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ အပြုံးတုတွေနဲ့ ဖုံးကွယ်ထားကြတာပါ ခက်တာက လူတွေက ကိုယ်တိုင်သာကောင်းအောင် မနေနိုင်ကြတယ်သူများကိုတော့ကောင်းတဲ့ အရာကို ပဲမြင်ချင်ကြတာမျိုး ကြုံချင်ကြတာမျိုးပါ
ဒါ့ကြောင့် သူတပါးရဲ့ weak point တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်တွေ ပြောဆိုကြ ပြင်ဖို့ ကြိုးစားကြမရတဲ့အခါ လှောင်ပြောင်ရှူံ့ချကြ ကဲ့ရဲ့အတင်းပြောကြရင်း စိုသောလက်တွေ ခြောက်လာကြတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ
ဒါ့ကြောင့် လူနှစ်ဦးအနေနဲ့ လူတစ်စုအနေနဲ့ ရေရှည်လက်တွဲသွားဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်….နေသင့်တဲ့ နေရာမှာပဲနေပါမမေးသင့်တဲ့ အရာတွေကို မမေးပါနဲ့မသိသင့်တဲ့ အကြောင်းတွေကို မသိချင်ပါနဲ့
သူ့ရည်မှန်းချက်တွေ သူ့ခံယူချက်တွေ သူ့မှာ မူလထဲကရှိနေတဲ့ စရိုက်တွေ ဗီဇတွေကို သင့်အမြင် သင့်ခံစားချက်တစ်ခု ထဲနဲ့ ပြုပြင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကိစ္စတစ်ခု ပြဿနာတစ်ခုကိုသင်နဲ့ထပ်တူကျဖို့ ဘယ်တော့မှ အတင်းအကြပ်မကြိုးစားပါနဲ့
ကောင်းဖို့အတွက် စေတနာနဲ့ပြောတာရယ် ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာရယ်က မတူဘူးဆိုတာ သိပါ…မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ ရိုးသားရပါမယ် ဒါ့အပြင် အကင်းလဲပါးရပါမယ်
သူ့စည်းကိုယ့်စည်း ၂ခုစလုံးကိုမပြောဘဲနဲ့ အလိုလို နားလည်ရပါမယ်…လူနှစ်ယောက်ဟာ လူတစ်စုဟာ ဘယ်သောအခါမှ အရာရာအတွက်ထပ်တူကျနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း သိရပါမယ်
ကောင်းတာတွေကို လက်ခံနိုင်သလိုမကောင်းတာတွေ အတွက်လည်းစည်းမကျော်စေဘဲ လက်ခံပေးနိုင်မှသာဘယ်သူနဲ့မဆို လက်တွဲနိုင်မယ် ဆိုတာလည်း သိရပါမယ်….
ဒါ့ကြောင့်မချစ်ခင်က မမုန်းဖို့အတွက်ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါတယ် စည်းကလေးတွေ မနင်းမိအောင်ပေါ့….ဘောင်ကလေးတွေ မကျော်မိအောင်ပေါ့…
Credit Original Writer.
“ မ ကြျော သငျ့ သော စညျး က လေး မြား ”
လူ တဈ ယောကျ နဲ့ တဈ ယောကျ ကွား မှာ စညျး လေး တဈ ခု တော့ ထား ပေး ပါ သူ ငယျ ခငျြး ပဲ ဖွဈ ဖွဈ ခဈြ သူ ခငျြး ပဲ ဖွဈ ဖွဈမောငျ နှ မ ကွား မှာ ပဲ ဖွဈ ဖွဈ နောကျ ဆုံး မိ ဘ နဲ့ သား သ မီး ကွား မှာ တောငျ စညျး လေး တဈ ခု ရှိ ရ ပါ မယျ
လို တာ ထကျ ပို မ ဝငျ မိ စေ ဖို့…သူ့ ရဲ့ကိုယျ ပိုငျ ဆုံး ဖွတျ ခကျြ ကိုယျ ပိုငျ ခံ ယူ ခကျြ သူ့ ရဲ့လှတျ လပျ ခှငျ့ သူ့ ရဲ့ရညျ မှနျး ခကျြ သူ့ ရဲ့ပွငျလို့ မ ရ တဲ့ ဗီ ဇ နဲ့ စ ရိုကျ တှေ အ တှကျ ကိုယျ က ဝငျ ရောကျ သငျ့ တဲ့ အ တိုငျး အ တာ ထကျ ပို ပွီး မ ဝငျ မိ စေ ဖို့….
မေး သငျ့ မေး ထိုကျ တာ ထကျ ပွော သငျ့ ပွော ထိုကျ တာ ထကျ ပို ပွီး ဘောငျ တှေ မ ကြျော ဖို့ အ တှကျ စညျး တဈ ခု ထား ကို ထား ရ ပါမယျ …
အ ရမျး ခဈြ ကွ တဲ့ သူ တှေ ဘာ လို့ မုနျး သှား ကွ သ လဲ ? အ ရမျး ခငျ ကွ တဲ့ မိတျ ဆှေ တှေ က ဘာ လို့ အ မုနျး ဆုံး ရနျ သူ တှေ ဖွဈ သှားကွ သ လဲ ?
အ ရငျ က အ ရမျး အ ဖှဲ့ ကြ စား အ တူ သှား အ တူ ပြျော ခဲ့ ကွ တဲ့ BFF တှေ ဘာ လို့ ခပျ တနျး တနျး တှေ ဖွဈ ကုနျ ကွ သ လဲ ?
ဘာ လို့ တဈ ယောကျ နဲ့ တဈ ယောကျ အ ထငျ မ ကွီး မ လေး စား ကွ တော့ တာ လဲ… ?
ပွ ဿ နာ အ မြား စု ရဲ့ အ ဖွေ က တော့ လို တာ ထကျ ပို ပွီး စညျး တှေ ကြျော ဘောငျ တှေ နငျး ခဲ့ ကွ လို့ ပါ …
အ ရမျး ခငျ အ ရမျး ခဈြ နေ ကွ ဆဲ ကာ လ မှာ တော့ အ ယုံ ကွညျ ရ ဆုံး လို့ ထငျ မိ ပွီး မိ မိ ဘ ဝ အ ကွောငျး မိ မိ စိတျ ဓာတျ အ ကွောငျး မိ မိ ရဲ့ မိ သား စု အ ကွောငျး အိတျ သှနျ ဖာ မှောကျပွော ပွ ကွ သ လို မိ မိ က လညျး သူ တ ပါး ရဲ့အ တှငျး ရေး တှေ ကို အ ကွံပွု ဝေ ဖနျ ဆုံး ဖွတျ ကွ ပါ တယျ….
အဆငျပွနေတေုနျးတော့ အဆငျပွနေတောပေါ့ အဲဒီကတဈဆငျ့ တကျ သူ့ရဲ့ဘဝ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝ သူ့ရဲ့အတှငျးရေး ကိုယျ့ရဲ့အတှငျးရေးထိ ဝငျရောကျလာကွတယျ
စညျးလှတျ ဝါးလှတျတှပွေောလာ ကွတယျ ကိုယျ့အတှေး ကိုယျ့အမွငျတှကေိုသူက လကျမခံတဲ့အခါ ရနျတှဖွေဈလာကွတယျ..
သူ့ရဲ့စညျးလှတျဘောငျလှတျ နယျခြဲ့ပွီး မိမိအတှငျးရေး အထိ ပါဝငျလာတာကိုလညျး ကိုယျတိုငျက အရငျလို မနှဈသကျနိုငျတော့ ပါဘူး အဲဒီ အခါမှာတော့
သူ့အပျေါကိုယျမွငျခဲ့တဲ့ ကိုယျအထငျကွီးခဲ့တဲ့ အားသာခကျြတှေ အပွငျ ကိုယျလကျခံလို့ မရတဲ့ ကိုယျမကွိုကျနှဈသကျတဲ့ သူ့ရဲ့ character တှပေါသိလာရတဲ့အခြိနျမှာ စညျးတှတေျောတျောကြျောနပေါပွီ
အကောငျးမွငျတာတှေ မှေးမှိနျပွီး မကောငျးမွငျခကျြတှေ အားသာလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ လူနှဈဦးရဲ့ဆကျဆံရေးဟာ အရငျကလို မနှေးထှေးနိုငျတော့ပါဘူး
သူကငါထငျသလို မဟုတျဘူး ဆိုတာတှသေူက မိတျဆှကေောငျး မဟုတျဘူး ဆိုတာတှေ တှေးမိလာကွပါတယျ တကယျတော့ လူတိုငျးရဲ့အတှငျးစိတျမှာ weak point တှရှေိနပေါတယျ မရငျ့ကကျြမှုတှရှေိတယျ မပွညျ့ဝတာတှလေညျး ရှိနပေါတယျ
အပျေါယံကသာ လူတှနေဲ့အဆငျပွဖေို့ လူအထငျကွီးဖို့ ရုပျဝတ်ထုပစ်စညျးတှေ အပွုံးတုတှနေဲ့ ဖုံးကှယျထားကွတာပါ ခကျတာက လူတှကေ ကိုယျတိုငျသာကောငျးအောငျ မနနေိုငျကွတယျသူမြားကိုတော့ကောငျးတဲ့ အရာကို ပဲမွငျခငျြကွတာမြိုး ကွုံခငျြကွတာမြိုးပါ
ဒါ့ကွောငျ့ သူတပါးရဲ့ weak point တှနေဲ့ ကွုံတှရေ့တဲ့အခါ စညျးလှတျဝါးလှတျတှေ ပွောဆိုကွ ပွငျဖို့ ကွိုးစားကွမရတဲ့အခါ လှောငျပွောငျရှူံ့ခကြွ ကဲ့ရဲ့အတငျးပွောကွရငျး စိုသောလကျတှေ ခွောကျလာကွတာ ကွုံဖူးကွမှာပါ
ဒါ့ကွောငျ့ လူနှဈဦးအနနေဲ့ လူတဈစုအနနေဲ့ ရရှေညျလကျတှဲသှားဖို့ ရညျရှယျတယျဆိုရငျ….နသေငျ့တဲ့ နရောမှာပဲနပေါမမေးသငျ့တဲ့ အရာတှကေို မမေးပါနဲ့မသိသငျ့တဲ့ အကွောငျးတှကေို မသိခငျြပါနဲ့
သူ့ရညျမှနျးခကျြတှေ သူ့ခံယူခကျြတှေ သူ့မှာ မူလထဲကရှိနတေဲ့ စရိုကျတှေ ဗီဇတှကေို သငျ့အမွငျ သငျ့ခံစားခကျြတဈခု ထဲနဲ့ ပွုပွငျဖို့မကွိုးစားပါနဲ့ကိစ်စတဈခု ပွဿနာတဈခုကိုသငျနဲ့ထပျတူကဖြို့ ဘယျတော့မှ အတငျးအကွပျမကွိုးစားပါနဲ့
ကောငျးဖို့အတှကျ စတေနာနဲ့ပွောတာရယျ ဝငျရောကျစှတျဖကျတာရယျက မတူဘူးဆိုတာ သိပါ…မိတျဆှကေောငျးဆိုတာ ရိုးသားရပါမယျ ဒါ့အပွငျ အကငျးလဲပါးရပါမယျ
သူ့စညျးကိုယျ့စညျး ၂ခုစလုံးကိုမပွောဘဲနဲ့ အလိုလို နားလညျရပါမယျ…လူနှဈယောကျဟာ လူတဈစုဟာ ဘယျသောအခါမှ အရာရာအတှကျထပျတူကနြိုငျမယျမဟုတျဘူးဆိုတာလညျး သိရပါမယျ
ကောငျးတာတှကေို လကျခံနိုငျသလိုမကောငျးတာတှေ အတှကျလညျးစညျးမကြျောစဘေဲ လကျခံပေးနိုငျမှသာဘယျသူနဲ့မဆို လကျတှဲနိုငျမယျ ဆိုတာလညျး သိရပါမယျ….
ဒါ့ကွောငျ့မခဈြခငျက မမုနျးဖို့အတှကျကွိုတငျ ပွငျဆငျထားလို့ရပါတယျ စညျးကလေးတှေ မနငျးမိအောငျပေါ့….ဘောငျကလေးတှေ မကြျောမိအောငျပေါ့…
တင်းတိတ်တွေကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း ( ၅ ) မျိုး မျက်နှာပေါ် အမည်းစက် ရှိနေတာက မျက်နှာအလှကို မပေါ်လွင်စေပါဘူး။ တင်းတိတ်ဖြစ်နေရင် အရမ်းကို စိတ်ညစ် ရ ပါတယ်။ တင်းတိတ်ကို မိတ်ကပ်ရည်နဲ့ ဖုံးဖို့ ကြိုးစားနေတာထက်စာရင် သဘာဝအတိုင်း ပျောက်ကင်းသွားအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။တင်းတိပ်တွေ ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ သဘာဝ နည်းလမ်းတွေ ကတော့. တင်းတိတ်တွေကို ယူပစ်သလို ပျောက်ကင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း(၅)မျိုး ( ၁ ) သံပရိုရည် ပါဝင်ပစ္စည်းများ – သံပရိုရည် ၊ ဂွမ်း ။ သံပရိုသီးကို အရည်ညှစ်ထုတ်ပေးပါ ရလာတဲ့အရည်ကိုခွက်ထဲ ထည့်ပေးပါ။ ဂွမ်းနဲ့ သံပရိုရည်ကိုတို့ပြီး …